Creative Writing » ဖိနပ်များ…..	34
တောင်ပေါ်သား says: နီ ဘိနပ်ရပြီးပြီပဲ
အဲဒီဘိနပ်ကြီး အဆင်ပြေတယ် ဟုတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: U Myo
naywoon ni says: ဖနပ်​ဆိုတာ …….
ဘာလို့ လဲ ဆို​တော့ ​တောကြို ခြုံကြား လမ်းပမ်းဆက်​သွယ်​​ရေး ခက်​တဲ့ ​နေရာ မှာ လူမဖြစ်​ခဲ့လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဒါတော့ ဟုတ်တယ်…။ အဲ့ဒီလိုလမ်းမျိုးနဲ့ ဒီလိုဖိနပ်ကြိုက်ပုံမျိုးဆို သေချာတယ်….
ခင်ခ says: ခြေတိုင်းနံပါတ်များသိခဲ့ရင် မန်း ဖိနပ်တရံတောင်ပို့ပေးလိုက်ချင်သေး။
Kaung Kin Pyar says: မန်းလေးဖိနပ်လား….အကြိုက်ဆုံးပဲ လေးခရေ….
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင်လည်း ဖိနပ်နဲ့ အိတ်ဆိုရင် မြင်တိုင်းဝယ်ချင်တယ်။
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်…အန်တီမမ..
Wow says: ငယ်ငယ်တုံးကတော့ အဖွားကအသားအရမ်းလှတော့ ခြေဖနောင့်လေးတွေနီ ခြေဖ၀ါးလေးတွေ ၀ါနှစ်ပြီးဥနေတော့… ကတ္တီပါခင်း ဖိနပ်လေးတွေ စီးထားရင်အရမ်းလှတာ… အာ့ဂို ကိုယ်လဲလှချင်လို့ အဖွားဖိနပ် ခဏခဏယူယူစီးတယ်… ကိုယ်နဲ့ကျတော့ ခြေထောက်ပေတလူးနဲ့ ဘယ်လှပါ့မလဲ… အဖွားက သူ့ဖိနပ်သူများစီးရင်မလှအောင်လုပ်ထားတယ် ဆိုပီးအော်ငိုတာ မှတ်မိသေးတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အဲ့ဒီ ကတ္တီပါခင်း ဖိနပ်ပေါ့…။ ခြေထောက်လှတဲ့သူတွေစီးလိုက်ရင်များ…အရမ်းထင်ပေါ်ပြီး သိပ်လှတာ…။ တစ်ခါလား ဒဂုံစင်တာမယ်…အသက် ၃၅လောက်တော့ရှိပြီ…အစ်မကြီးတစ်ယောက်စီးထားတာ…။ သူ့ခြေထောက်လေးက ဖွေးဥနေပြီး လှလွန်းလို့…လိုက်ငေးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်…။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကင်းကောင်ပြာ ဖိနပ်မီစီးနဲ့ ခြေနာဒယ်.. ။ ဂုံးပိုး ပို့ပေးမဲ… လမ်းမှာ လူပြတ်မှ ခြုံတိုးပီး tea မှာ… ချိုဆိမ့် နှီခွက်… မလိုင်နှမ်းခြင်း… လျှာလွတ်
Kaung Kin Pyar says: အူးကြောင်ကြီး ခြုံတိုးဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတယ်….။ ဒီလိုဆို အူးကြောင်အတွက် ခုံဖိနပ်က အသင့်တော်ဆုံးပဲ…
Nyo Win says: အဲ့ဒီလိုပဲ……….လက်တွဲဖော်ဆိုရင်……:)
Kaung Kin Pyar says: ဆက်စပ် စဉ်းစားတယ်လား ကိုညိုရေ…..
Mike says: .ဘိနပ်….ကျုပ်ကတော့ ကွင်းထိုးဘိနပ်ဆိုလုံးဝမကြိုက်
Kaung Kin Pyar says: ကောင်းကင်ပြာရောပဲ အူးမိုက်စ်…
ခင်ဇော် says: အသည်းလေးးး
Kaung Kin Pyar says: အဲဒီ အမှားကြီးမှာ စိတ်ညစ်ခံပြီး ကြာကြာမနေနဲ့။ သိလားး။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့၊ အသက်ရှည်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့ လူပို ပစ္စည်းပိုကို စွန့်ထုတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်မတွန့်နဲ့ သလားးး
Alinsett@Maung Thura says: စာရေး သိပ်ကောင်းတယ်ကွယ်
Kaung Kin Pyar says: နိစာရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကလဲ အောက်ဆုံးစာပိုဒ်ပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် အဟေးးးဟေးးးး
padonmar says: မန်းလေး သားရေစိမ်းဖိနပ်ကို အကြိုက်ဆုံး။ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အရပ်ပုတော့ ဘတ်စကားလက်ကိုင်ကိုမမီမှာစိုးတယ်။ဒါ့ကြောင့် ဒေါက်နည်းနည်းပါတဲ့ ဖိနပ်ပဲ ရွေးရတယ်။
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် အာတီဒုံ…။ ကောင်းကင်ပြာလဲ တစ်ခါတစ်ခါ ဖိနပ်အမြင့်တွေစီးရတာ စိတ်ပျက်လာတယ်….။ မြင့်နေရင် သွားရမယ့်လမ်းခရီးကို တွက်ရချက်ရနဲ့…..
မြစပဲရိုး says: ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့။ အရေးအဖွဲ့ ကောင်းလေးပါ ကင်းကောင်လေး။
Kaung Kin Pyar says: အိတ်တွေလဲ ကြိုက်တယ်အရီးးး.
ငယ်ငယ်ကဆို အိတ်အကြီးကြီးတွေကို အရမ်း ကြိုက်တာ..။ သူငယ်ချင်းတွေကဆိုပြောတယ်…နင့်အိတ်တွေက နင်သာမက နင့်တစ်မျိုးလုံးတောင် ထိုင်လိုက်လို့ ရတယ်တဲ့….။ သူရို့ပြောတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်….။ တစ်ခါတစ်လေ အိတ်ကွယ်လို့ လူက ပျောက်ပျောက်သွားတယ်…
Shwe Ei says: -အရိုးဆုံးက အမြဲတန်းဆန်းသတဲ့ ကောင်းကင်ပြာရေ..
-ကို့အ့တွက်သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံးဖိနပ်က ဘလိုဒီဇိုင်းလဲ ဆိုတာ သိနေဖို့ဘဲလိုတာ -(မှတ်ချက်..ဖိနပ်ဒီဇိုင်းဆန်းတာ မှန်သမျှအကုန်ကြိုက်အိ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ် မရွှေအိ…။ တစ်ခါတစ်လေ သွားနေရင်း ခြေထောက်အရမ်းနာလာလို့ ဖိနပ်အပါးရှာဝယ်စီးရတာမျိုးလဲ ကြုံဖူးတယ်…။
ခင်ဇော် says: ဟိုနေ့က စိတ်ဂယောက်ဂယက်နဲ့ ကမန်းကတန်း မန့်သွားရလို့
Kaung Kin Pyar says: ကလေးတွေရှေ့မှာလဲ ဖိနပ်မချွတ်ရဲဘူးမှုတ်လား မမဂျီး…..
ခင်ဇော် says: ဖိနပ်တွေက စီးလို့ မဝခင် စုတ်ပြတ်သွားတာ များလို့။
Kaung Kin Pyar says: ကောင်းကင်ပြာ ဖိနပ်ဆိုဒ်က ၃၇ ။ အမေနဲ့ ဖိနပ်ဆိုဒ်တူတူမို့ အမေ့ဟာတွေ အလစ်ခိုးစီးတိုင်း ဆူခံထိတာ…။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် ဖိနပ်ကြွေးတောင်းနေသေး…။
ခင်ဇော် says: အမက ၃၈
Crystalline says: အစ်မမှာလည်း…ဖိနပ်ဇာတ်လမ်းတွေများပါ့…. အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ့်အတွက် အနှောက်အယှက်မရှိသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ဖိနပ်မျိုး…ကိုယ့်ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်တာမျိုးတွေပဲဝယ်ဖြစ်တော့တယ်… ဖိနပ်တွေ..အိတ်တွေ.. လှလို့ဝယ်ခဲ့ပြီး။အခွံတွေလန်.. ခွာတွေပြိုကျတဲ့ဒွတ်ခတွေ ခံရပေါင်းများပြီးမှ ရလာတဲ့သင်ခန်းစာတွေ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ဟုတ်တယ်..မခွစ်…ဖိနပ်ရော အိတ်ရောက အသုံးမပြုတာကြာရင် ပျက်စီးကုန်ရော…မခွစ်ပြောသလို ရာသီဥတုနဲ့ကိုက်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ….
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အစ်မကတော့ ဖိနပ်ကို ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာပဲစီးဖြစ်တယ်။အရပ်မြင့်တော့ ဖိနပ်မြင့်တွေလည်းမစီးဖြစ်ဘူး။